ရန်ကုန် လှော်ကားဥယျာဉ် – Thet Nandar
10.1.10 – Hlawka & Fmi Swimming Pool Slideshow: Thet’s trip from Bloomfield, Connecticut, United States to Yangon (Rangoon), Myanmar was created by TripAdvisor. See another Yangon (Rangoon) slideshow. Create your own stunning slideshow with our free photo slideshow maker.
မနှစ်က ၁၀.၁.၁၀ သမီးမွေးနေ့အကြိုတုန်းက သွားလည်ခဲ့တဲ့ လှော်ကားဥယျာဉ်။ မျောက်တွေ အများကြီးကို အစာကျွေးခဲ့တာကို သဘောကျတာလည်း ပါသလို၊ အခုဆို ဆင်စီးတာ နဲ့အတူ တခြား အပန်းဖြေစရာတွေပါ ပိုများလာတာတွေ့တယ်။
လှော်ကားက အပြန် သမီးငယ်ငယ်လေးတုန်းက နေခဲ့ဖူးတဲ့ လှိုင်သာယာ ပန်းလှိုင်ဆေးရုံရှေ့က FMI အိမ်ရာမှာ ရှိတဲ့ FMI ရေကူးကန်မှာ ရေသွားကူးတယ်။ FMI city mart မှာ ဈေးဝယ်၊ season and bakery မှာ မုန့်စားပီး အိမ်ပြန်တယ်။